သတင်း - J.able Bio VTM နမူနာပြွန်ကိရိယာအစုံ - မှန်ကန်သောဗိုင်းရပ်စ်နမူနာပြွန်ကိရိယာအစုံ (swab နှင့် အသံအတိုးအကျယ်) ကိုရွေးချယ်နည်း
J.able Bio မှထုတ်လုပ်သော တစ်ခါသုံးဗိုင်းရပ်စ်နမူနာပြွန်တွင် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိပြီး၊ အမျိုးမျိုးသော swabs၊ storage liquid volume စသည်တို့နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိနိုင်သော စံပြပြွန်ကိရိယာကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နည်း။ ၎င်းကို နမူနာပုံစံနှင့် ရည်ရွယ်ချက်မှ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
နမူနာပုံစံ- တစ်ကြိမ်သုံး၊5in 1 ရောစပ်၊ 10 in 1 ရောနှောထားသည်။
လူတစ်ဦးနမူနာယူခြင်းဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးတည်း၏နမူနာကို နျူကလိယအက်ဆစ်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် မသင့်လျော်သော ဗိုင်းရပ်စ်နမူနာပြွန်တစ်ခုတွင် ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ မူအရ၊ အန္တရာယ်များသောဒေသများနှင့် အဓိကလူဦးရေအတွက် ဤနမူနာပုံစံကို လိုအပ်ပါသည်။
5 in 1 ရောနှောနမူနာ၊ 10 in 1 ရောနှောနမူနာဆိုသည်မှာ လူ5ဦး သို့မဟုတ် လူ 10 ဦးကို သီးခြားနမူနာယူ၍ နမူနာများကို တူညီသောဗိုင်းရပ်စ်နမူနာပြွန်တွင် ထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပေါင်းစပ်နမူနာမုဒ်သည် အကြီးစားစမ်းသပ်မှုပရောဂျက်များအတွက် သင့်လျော်ပြီး ထိရောက်သောစိစစ်ခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ်ချွေတာခြင်း၏ အားသာချက်များရှိသည်။
5-in-1 သို့မဟုတ် 10-in-1 ရောစပ်နမူနာကို အသုံးပြုပါက၊ စစ်ဆေးမှုသည် အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါက၊ လူ5သို့မဟုတ် 10 ဦးစလုံးသည် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သော သို့မဟုတ် အားနည်းသောအပြုသဘောကို တွေ့ရှိပါက ၎င်းကိုချက်ချင်းခြေရာခံမည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ဖန်ပြွန်တစ်ခုအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် ထပ်မံစုဆောင်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် လူ5သို့မဟုတ် 10 ဦးတွင် မည်သူသည် အပြုသဘောဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
1. ၎င်းကိုလက်တွေ့လူနာတုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်၊ လက်၊ ခြေနှင့်ပါးစပ်ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဂျိုက်သိုးဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အခြားနမူနာများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ခွဲထုတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ လိုအပ်သောသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ပမာဏသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 3.5ml သို့မဟုတ် 5ml ဖြစ်သည်။ (နျူကလိစ်အက်ဆစ် ထောက်လှမ်းခြင်းကိရိယာနှင့် ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ကြားခံကိရိယာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်)
2. ၎င်းကို ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စုဆောင်းခြင်းနှင့် ရေတိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အတွက် အသုံးပြုသည်။ လိုအပ်သောသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ပမာဏမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် 6ml ဖြစ်သည်။
3. ကြက်၊ ဝက်နှင့် အခြားတိရစ္ဆာန်များကို နေ့စဥ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် နမူနာယူခြင်းအတွက်။ လိုအပ်သောသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ပမာဏသည်ယေဘုယျအားဖြင့် 1.5ml ဖြစ်သည်။
ပို့စ်အချိန်- ဇွန်လ 25-2021
Viral Transport Media Kit, Falcon Centrifuge Tubes 15ml, Self Standing Centrifuge Tubes များ, Sterile Microcentrifuge Tubes များ, Nasopharyngeal Swab ကလေးအထူးကု, Buccal Swab စုဆောင်းမှုအစုံ,